Midowga Musharixiinta oo faarujinaya degmada Wadajir | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Midawga Musharixiinta ayaa billabay in ay ka diga rogtaan degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir oo ay dhamaantood deganaayeen in muddo ah, kadib xaalado amni oo kusoo kordhay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kadib qaraarkii ka soo baxay Golaha Shacabka 12-kii bishaan, ee muddada loogu siyaadiyay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, Hoggaamiyayaasha Mucaaradka ayaa ku heshiiyay in ay ka guuraan halka degmo ay ku aruursan yihiin, Musharx kastana uu dego goob ammaan ah oo uu si buuxda ugu kalsoon yahay.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah oo ka tirsan Xisbiyada Mucaaradka, ilaa hadda waxaa guuray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo u guri gaddistay, degmada Kaaraan, waxaana la filayaa inuu dhawaan isna degmada Cabdicasiis saldhigto Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ra’iisul Wadaarihii hore Xasan Cali kheyre iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa qudhoodu la filayaa in ay caawa u kala hoyaadaan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag, oo noqon doonaa xarumahooda rasmiga ah.
Musharixiinta kale, iyo qaar ka mid ah Xildhibaannada Mucaaradka ayaa qudhoodu billaabay in ay ka guuraan xaafadihii ay hore u deganaayeen, waxaana arrintaan lagu sheegay qorshe amni oo iyo in afarta jaho ee magaalada ay degaan Mucaaradku.
Magaalada Muqdisho ayaa xalay qarka u fuusahay, in uu qarxo gacan ka hadal u dhaxeeya Taliyihii hore ee Booliska gobolka banaadir, Saadaq Joon, iyo ciidamo Farmaajo soo adeegsaday oo uu hoggaamniyay Taliyaha ciidanka Lugta Jeneraal Biixi.
Hayeeshee, dareenka bulshada Gobolka Banaadir, oo si weyn u kacay ayaa sababtay in Kooxdii Madaxtooyada ka soctay ay dib ugu laabtaan fariisimahoodii, xaaladda Muqdisho ayaana hadda ah mid deggan.